အရင်းအမြစ် | October 2019
အသုံးပြုသူများသည် ပို. ပို. ပြဿနာများထက်အခွင့်အလမ်းများအတွက်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ cloud storage တည်ဆောက်ရန်လက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်။ တစ်ခုမှာထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခါတစ်ရံမိုဃ်းတိမ်ကိုအချက်အလက်များ၏ထပ်တူအတွက်မှားယွင်းမှုတစ်ခုကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်, မူလအစဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နဲ့ကအတူတက်ထားရန်မလိုပေ။
မူလအစကို EA ရဲ့နဲ့မိတ်ဖက်ထံမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုဝယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်သင်ပထမဦးဆုံးမှတ်ပုံတင်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အလားတူသူတွေကိုထံမှအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောသည်မဟုတ်, နေဆဲအချို့ကိုသင်မှတ်အထူးအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ မူလအစပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ - မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခု, ဒါပေမယ့်လည်းအသုံးဝင်သော features နဲ့ဆုကြေးငွေအမျိုးမျိုးတို့ကိုသာဖြစ်ပါတယ်။
မှားယွင်းမှုတစ်ခု၏အမှု၌မူလအစ Server နဲ့ compound
အတော်လေးမကြာခဏသင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြားပရိုဂရမ်တစ်ခုကအင်တာနက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်မကျမည်အကြောင်း, အပြင်၎င်းတို့၏ဆာဗာကတဆင့်ချိတ်ဆက်ဖို့လာသောအခါပြဿနာတစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အတူတူတခါတရံမူလအစ client ကိုသက်ဆိုင်သည်။ သူလည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆာဗာကိုချိတ်ဆက်သောကြောင့်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းမတတျနိုငျသောအသုံးပြုသူဖို့ "သတင်းကောင်း" မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖွစျနိုငျပါတယျ။
မဟုတ်ကိုအမြဲမူလအစ၌မွေ့လျော်သို့မဟုတ်လိုအပ်သောပေါ်မှာရှိသမျှဂိမ်း။ ဒါဟာတဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြားထုတ်ကုန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ရာပေါင်းများစွာဖြစ်ပေမယ့်ဒီအခြေအနေအားလုံးကိုအသိပါစေပါဘူးသူတို့ကို disassembled နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမူလအစကနေဂိမ်းဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ၏ရွေးချယ်မှုများထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် သာ. ကောင်း၏။ မူလအစမူလအစအတွက်ဖျက်ခြင်းဂိမ်းများနှင့်ကစားသမားထပ်တူများအတွက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်တစ်ခုတည်းစနစ်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါမူလအစအတွက် password ကိုပြောင်းခြင်း
မည်သည့်အကောင့်များ၏ password ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာသည့်အလွန်အရေးကြီးပါသည်, လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အရင်းအမြစ်များ၏အမြောက်အများအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏ဆန္ဒကိုပေါ် မူတည်. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအဆင့်ကို, သေချာစေရန်အလို့ငှာစကားဝှက်ကိုပြောင်းဖို့နိုင်စွမ်းထောက်ခံပါတယ်။
အတော်လေးမကြာခဏအသုံးပြုသူ authentication ကိုလိုအပ်သောအွန်လိုင်းအစီအစဉ်များအမျိုးမျိုး, အရူးသွားနှင့်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအဘို့, ဆာဗာနှငျ့ဆကျသှယျနှင့်အသုံးပြုသူဒေတာကိုလက်ခံရရှိရန်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ မူလအစ client ကိုအဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခါအားလျော်စွာ, ပြဿနာတစ်ခုသင် program ကိုမှာ login ရန်ကြိုးစားသောအခါတစ်ဦး access ကိုအမှားပေးပြီးလုပ်ကိုင်ဖို့ငြင်းဆန်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သင်မူလအစ client ကိုမှတဆင့်သူတို့ကို run တဲ့အခါမှာ Electronic Arts တို့သာအလုပ်လုပ်အများစုမှာဂိမ်းကုမ္ပဏီ။ လျှောက်လွှာအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထည့်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု (ပြီးတော့ကို standalone mode မှာအလုပ်လုပ်နိုင်) လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှိနေတဲ့ connection ကိုမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မူလအစတုန်းပဲ "သင် network ပေါ်မှာဖြစ်ရပါမည်။ " အဲဒီကတင်ပြထားပါတယ်မည်သည့်အခါအခြေအနေကိုလည်းမရှိ
ယနေ့တွင် e-mail, မှတ်ပုံတင်မှာအင်တာနက်အများအပြားဖြစ်ရပ်အတွက်အသုံးပြုသည်။ မူလအစမျှချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာအခြားက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အဖြစ်, သင်ကဆိုပါတယ် post ကိုရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုအစားထိုးဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, service သင်ဤလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ E-mail ကိုမှတ်ပုံတင်မှာမူလအစမှချည်ထားသောမူလအစအီးမေးလ်အကောင့်များနှင့်ထို့နောက်ရဲ့ login အဖြစ် authenticate အသုံးပြုသည်။
ပရိုဂရမ်မာတစ်ဦး unspoken အုပ်ချုပ်မှုကိုရှိပါတယ်: ကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် - မထိကြဘူး။ သို့သော်များစွာသောအစီအစဉ်များနေဆဲစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေပါဝငျမလွှဲမရှောင်နီးပါးအမြဲနေသောပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုများ, လိုအပ်သည်။ တူညီသည့်မူလအစ client ကိုသက်ဆိုင်သည်။ မကြာခဏ, သင်နောက်တစ်နေ့ update ကိုနောကျတင်းကျပ်စွာ application ကိုအလုပ်လုပ်ရပ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
မူလအစအချို့ဝယ်ယူမှုစိတ်ပျက်စေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ - ဒါကြောင့်အပေါ်မတရားမှုဖွမျှော်လင့်ချက်များ, device ကိုအပေါ်ဆငျးရဲသောစွမ်းဆောင်မှုနှင့်။ ပြဇာတ်မဖြစ်နိုင်ပါအခါ, ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ဖယ်ရှားပစ်ရမယ့်အလိုဆန္ဒလည်းမရှိ။ ထိုအညွှန်ပိုင်ခွင့်ရိုးရှင်းသောဖယ်ရှားရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတော်များများခေတ်မီဒီဇိုင်းများအလွန်စျေးကြီးတယ်, ကုန်ကျစရိတ်ရူဘယ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်နှင့်သုံးစွဲငွေကိုသနားစရာဖြစ်လာသည်။
မူလအစအတွက် 0: မှားယွင်းနေသည်ဖြေရှင်းချက် 196632
အမြဲအသုံးပြုသူများမူလအစ client ကိုအတွက်ဝင်ပေါက်နှင့်အတူအခက်အခဲများကြုံနေရကြသည်မဟုတ်။ မကြာခဏကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်စတင်သည်ဒါပေမယ့်သင်ပြဿနာတွေရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်တာဝန်များကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်ကအတင်းရန်ကြိုးစားသောအခါ။ 0: ဥပမာ, သင်ကုဒ်အရေအတွက်က 196632 နှင့်အတူ "အမည်မသိအမှား" ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒါဟာအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ပိုကျိုးနပ်သည်။
မူလအစအတွက်လုံခြုံရေးမေးခွန်းကိုပြောင်းခြင်းနှင့် restore ပြန်
မူလအစလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမေးခှနျးကနေတဆင့်တချိန်ကလူကြိုက်များကာကွယ်မှုစနစ်အားအသုံးပြုသည်။ Service ကိုမေးခွန်းနှင့်အဖြေနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်လိုအပ်တယ်, နောက်မှ user data ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အသုံးပြုသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, များစွာသောအခြားဒေတာလိုပဲလျှို့ဝှက်ချက်မေးခွန်းနှင့်အဖြေအလိုတော်မှာပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမေးခှနျးကိုအသုံးပြုခြင်းဒီစနစ်ကတည်းဖြတ်ခံရခြင်းမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးရန်အသုံးပြုသည်။
မူလအစအတွက်တိုးကို download speed ကို
မူလအစခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာဂိမ်းမှာများစွာသောအရေအတွက်ကပေးပါသည်။ လူအမြားတို့ကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုယနေ့ရိုးရှင်းစွာအလွန်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာကြသည် - စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ထိပ်စီမံကိန်းများ, ပတ်ပတ်လည် 50-60 GB အထိအလေးချိန်နိုင်ပါတယ်။ အလွန်အရည်အသွေးမြင့်အင်တာနက်ကဒေါင်းလုပ်လျင်မြန်စွာကျရှုံးလျှင်, ဤဂိမ်းကို download လုပ်ပါအဖြစ်ခိုင်မာတဲ့အာရုံကြောဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။
မူလအစကတဆင့် Battlefield3ရဲ့ပစ်လွှတ်နှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်း
Battlefield3ကကျော်ကြားစီးရီးအနည်းငယ်သစ်ကိုအပိုင်းပိုင်းထွက်လာသသော်လည်း, အလွန်လူကြိုက်များဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးအခြိနျမှနျမှကစားသမားဒီသေနတ်သမား run ဖို့ငြင်းဆန်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျနေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ပါကနောက်ထပ်ပြဿနာကိုလေ့လာစူးစမ်းခြင်းနှင့်အဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေထက်အားဖြင့် idly ထိုင်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
အားလုံးနီးပါးဟာဂိမ်းကုမ္ပဏီကို EA နှင့်အနီးကပ်ဆုံးမိတ်ဖက်ကစားသမားပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်အချက်အလက်များ၏မိုဃ်းတိမ်ဆာဗာနှင့်သိုလှောင်မှုနှငျ့ဆကျသှယျဖို့မူလအစ client ကိုကွန်ပျူတာဖို့လိုအပ်သည်။ သို့သျောလညျးမဟုတျဘဲအစဉ်အမြဲဖြစ်နိုင်သမျှ client ကို service ကို install လုပ်ရန်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်တန်း၏, မဆိုဂိမ်းအကြောင်းနှင့်မျှမတို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနိုင်ပါတယ်။
မူလအစအတွက်ဂိမ်း activation နှင့် add
EA ၏မိတ်ဖက်များမှဂိမ်းအတော်များများနှင့်မူလအစတွင်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်မဟုတ်ဘဲအားလုံးအသုံးပြုသူများသည့်လုပ်နေတာဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း။ ဒါပေမဲ့ဒီထုတ်ကုန်ကြောင်းဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်ချည်ထားရန်လိုအပ်သည်မရှိတော့ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, အချို့ကိုသင် action ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မူလအစအတွက်မူလအစ Activation ဂိမ်းအတွက်ဂိမ်းကိုသက်ဝင်အထူးကုဒ်ဝင်သဖြင့်ပြုမိသည်။
သင်ကစားပွဲကိုစတငျသညျ့အခါမှားယွင်းနေသည်ဖြေရှင်းချက် "မူလအစ client ကို run မ"
မူလအစကကွန်ပျူတာဂိမ်းတစ်ခုဖြန့်ချိ, ဒါပေမယ့်လည်းအစီအစဉ်များကို run နှင့်အချက်အလက်ညှိနှိုင်းဖို့ client ကိုမသာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအလုနီးပါးအပေါငျးတို့သဂိမ်းများကိုတရားဝင် client ကို service ကိုအပြီးညာဘက်ဖြစ်ပျက် start ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြဿနာများမရှိဘဲဖျော်ဖြေနိုင်မဆိုလိုပေ။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးအမှားဂိမ်းလည်း run မသည်မူလအစ client ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ start မည်မဟုတ်ကြောင်းပေါ်လာလိမ့်မည်။
အချိန်မူလအစ client ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်မပါဘူးဆိုရင်, သငျသညျမမှန်ကန်ကြောင်း application သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးကြုံတွေ့ရပြီး run ရန်သူ၏ငြင်းဆိုအားဖြင့်ထိုအတူ ပြု. , ဖြစ်နိုင်တယ်။ သို့သော်ဤအမှု၌, အသုံးပြုသူတရားဝင် client ကိုမှတဆင့်တစ်ပြေးလိုအပ်ပရိုဂရမ်ကိုသုံးပါနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့မူလအစ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို update လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုမည်။
https://termotools.com my.termotools.com © အရင်းအမြစ် 2019